ဒီမိုကရေစီထိပ်သီးအစည်းအဝေးကျင်းပမည့် အမေရိကန်၏ အရည်အချင်းကို တရုတ်နိုင်ငံ ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် မေးခွန်းထုတ် - Xinhua News Agency
ပေကျင်း ၊ ဒီဇင်ဘာ ၈ ရက်(ဆင်ဟွာ)
ဒီမိုကရေစီကိုမျက်ကွယ်ပြုထားပြီး ဒီမိုကရေစီထိပ်သီးအစည်းအဝေးတစ်ခုကျင်းပမည့် အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ အရည်အချင်းကို တရုတ်နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ကျောက်လိကျန်းက ဒီဇင်ဘာ ၇ ရက်တွင် မေးခွန်းထုတ်လိုက်သည်။ခေတ်မီဆေးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာများ နှင့် အရင်းအမြစ်များ အလျှံအပယ်ရှိနေသော်လည်း COVID-19 ကပ်ရောဂါကို အမေရိကန်နိုင်ငံက ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။ “ အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ သေဆုံးသူ ၈၀၀,၀၀၀ ကျော် နဲ့ ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ခံရသူပေါင်း သန်း ၅၀ ကျော်ရှိပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ဘယ်နိုင်ငံထက်မဆို ပိုများတဲ့အရေအတွက်ပါ ။ ဒီလောက်များတဲ့ပမာဏဟာ လူ့အခွင့်အရေးအတွက် ဝမ်းနည်းကြေကွဲစရာဖြစ်ရပ်ဆိုးကြီးတစ်ခုပါပဲ ၊ ဒါဟာ အမေရိကန် ဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်လား?” ဟု ကျောက်လိကျန်းက မေးခွန်းထုတ်ခဲ့သည်။
“ အမေရိကန် လူမှုအသိုက်အဝန်းထဲမှာ လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုဟာ နက်နက်ရှိုင်ရှိုင်းအမြစ်တွယ်နေတယ် ။ လူဖြူကြီးစိုးမှုက နေရာ အနှံ့အပြားဖြစ်နေတယ် ၊ တိုင်းရင်းသားတန်းတူ ညီမျှရေးက ဟိုးခပ်ဝေးဝေးမှာပဲရှိနေသေးတယ် ။ ဒါဟာ အမေရိကန်က ဒီမိုကရေစီကို ထိန်းနေတာလား? ” ဟု ၎င်းက ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့သည်။
၂၀၀၁ ခုနှစ်ကတည်းက အာဖဂန်နစ္စတန် ၊ လစ်ဗျား ၊ အီရတ် ၊ ဆီးရီးယား နှင့် အခြားသော နိုင်ငံများတွင် အမေရိကန်၏ စစ်ပွဲများ နှင့် စစ်ဆင်ရေးများကြောင့် လူထောင်ပေါင်းများစွာ အသက်သေဆုံးခဲ့ရသလို ပြည်သူ သန်းပေါင်းများစွာ အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရကြောင်း ကျောက်က မီးမောင်းထိုးပြခဲ့သည်။
“ အမေရိကန်ဒီမိုကရေစီဟာ အခြားနိုင်ငံတွေမှာ နေရာကျအောင် မလုပ်နိုင်ပါဘူး ၊ အမေရိကန်ဟာ ‘အရောင်အသွေးတော်လှန်ရေး’ စလုပ်တဲ့နေရာမှာ နာမည်ဆိုးနဲ့ကျော်ကြားပါတယ်။ ဒါဟာ အမေရိကန်က ဒီမိုကရေစီကို ထိန်းနေတာလား?” ဟု ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက ဆိုသည်။
စစ်တမ်းများနှင့် အစီရင်ခံချက်များအရ အမေရိကန်ပြည်သူ ၄၅ ရာခိုင်နှုန်းက ဒီမိုကရေစီသည် နိုင်ငံ၌ ကောင်းမွန်စွာ ပြုမူဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိဟု ယူဆကြပြီး တစ်ချိန်တည်းမှာပင် အမေရိကန်လူငယ် ၅၂ ရာခိုင်နှုန်းက ဒီမိုကရေစီသည် ဒုက္ခတွင်းထဲ ကျရောက်နေခြင်း သို့မဟုတ် ပျက်စီးခြင်းဟု ယုံကြည်နေကြသည်။
အမေရိကန်ဒီမိုကရေစီ၏ အနာဂတ်သည် များစွာသော ပြည်တွင်းခြိမ်းခြောက်မှုများရှိနေသည်ဟု အမေရိကန်နိုင်ငံသား ၈၁ ရာခိုင်နှုန်းက ပြောဆိုကြပြီး အမေရိကန်နိုင်ငံသား ၁၇ ရာခိုင်နှုန်းမျှကသာ အမေရိကန်ဒီမိုကရေစီသည် အခြားနိုင်ငံများအနေဖြင့် လိုက်နာကျင့်သုံးရန် ကောင်းမွန်သော စံနမူနာဖြစ်ကြောင်း နှင့် တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ကမ္ဘာ့ပြည်သူ ၄၄ ရာခိုင်နှုန်းက အမေရိကန်နိုင်ငံသည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို အကြီးဆုံး ခြိမ်းခြောက်သူအဖြစ် ရှုမြင်နေကြကြောင်း ကျောက်က ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
“ဒီမိုကရေစီကို မျက်ကွယ်ပြုနေတဲ့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံက ဒီမိုကရေစီထိပ်သီးအစည်းအဝေးကျင်းပဖို့ အရည်အချင်းရှိရဲ့လား ” ဟု ကျောက်က ဆက်လက် မေးခွန်းထုတ်ခဲ့သည်။(Xinhua)
BEIJING, Dec.7(Xinhua) — Chinese Foreign Ministry’s spokesperson Zhao Lijian on Tuesday questioned the qualification of the United States that disregards democracy to holdasummit on democracy.
“The United States has registered over 800,000 deaths and 50 million COVID-19 infections, more than any other country in the world. This amounts toahuman rights tragedy. Is this how the U.S. upholds democracy?” Zhao asked.
“In U.S. society, racism is deeply entrenched, white supremacy is rampant, and ethnic equality remains beyond reach. Is this how the U.S. upholds democracy?” he continued.
“The American democracy does not fit in other countries and the U.S. is notorious for launching ‘color revolution’. Is this how the U.S. upholds democracy?” the spokesperson said.
“Is the United States,acountry that disregards democracy, qualified to holdasummit on democracy?” Zhao added. Enditem
Photo- Chinese Foreign Ministry’s spokesperson Zhao Lijian held Press Conference. (Xinhua)